विदेशबाट आउने नेपालीलाई कहाँ राख्ने ? क्वारेन्टाइन थप्दै स्थानीय पालिकाहरु | Mechikali Daily
विदेशबाट आउने नेपालीलाई कहाँ राख्ने ? क्वारेन्टाइन थप्दै स्थानीय पालिकाहरु
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: ३१ बैशाख २०७७, बुधबार ०५:४२
बुटवल, बैशाख ३१ । विश्वव्यापी महारीका विरुद्ध जुधिरहेका बेलामा सीमावर्ती क्षेत्रबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको व्यवस्थापनको चटारो थपिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरबाट फर्किएका र फर्किने तयारीमा रहेका प्रवासी नेपालीलाई राख्न अहिले यसक्षेत्रका पालिकाहरु क्वारेन्टाइन निर्माणमा केन्द्रित भएका छन् । सीमावर्ती भारतीय सहरमा र कतिपय त दसगजामै आएर बसेका नेपालीलाई उद्धार गरेर तिनलाई राख्ने क्वारेन्टाइन बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिकासहित रुपन्देहीका १६ वटै पालिकाहरु अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका छन् ।
भारतबाट आउने प्रवासीलाई सकभर पायक मिलाएर सम्बन्धित पालिकामै क्वारेन्टाइन बनाएर राखिने र त्यस्तो सम्भव नहुनेलाई तयारीकै कुनै पालिकामा व्यवस्थित गरेर राख्नेगरी तयारी भइरहेको बताइएको छ । पहिलो चरणमा कति हजार आउँछन् त्यो हेरेर अरु विस्तार गर्नेगरि तयारी भइरहेको छ । बुटवल, भैरहवा, सैनामैना र तिलोत्तमामा यसअघि नै क्वारेन्टाइन निर्माण भइसकेका छन् । पहिले भएका क्वारेन्टाइनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, नयाँ ठाउँमा विस्तार गर्ने र आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउने काममा केन्द्रित भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । बुटवलले तामनगरको कोरिएन इन्ष्टिच्यूटमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसकेको छ । भने, अब धेरैजनालाई व्यवस्थित गर्नेगरि नयाँ ठाउँमा तयारी भइरहेको छ ।
भारतका विभिन्न शहरबाट सीमामा आएर बसेका प्रवासीहरुलाई सीमावर्ती जिल्लाका पालिकाहरुमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी स्वरुप क्वारेन्टाइन थप्न लागिएको नगरपालिका संघका प्रदेश संयोजक समेत रहुनभएका बुटवलका प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । बुटवलमा धागो कारखानाको बन्द रहेका भवनमा उपमहानगर र प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा कोरोना विशेष आइसोलेशन अस्पताल निर्माण भएको छ । त्यहाँ आइसीयूसमेत ६० वटा वेड छन् । यहाँ हाल ३६ जना उपचाररत छन् । उपचार गराइरहेका रुपन्देहीका पहिलो कोरोना संक्रमित युवा भने डिस्चार्ज भएका छन् । दसगजा क्षेत्रमा आएर बसेका केही प्रवासी नेपालीलाई बुधबार स्वदेश ल्याइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र स्थानीय तहको सहकार्यमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरुलाई राख्ने ठाउँका बारेमा रुपन्देहीका केही पालिकाले भने विरोध जनाएका छन् । रोहिणी र मायादेवी गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने भन्दै बुधबार अबेरसम्म विरोध गरेका थिए । केहि पालिकाले भने स्थानियको बहानामा सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेका छन् । फोरमका नेता समेत रहेका रोहिणि गापा अध्यक्ष सनोज यादबले स्थानीयले प्रवासि नेपाली नल्याउन दबाब दिएको बताए । स्वदेश फर्किन लागेका नेपालीले भारतका विभिन्न शहरमा क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरिसकेका जनाइएको छ । सीमाबाट ल्याइएका नेपालीलाई रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका, ओमसतिया र रोहणी गाउँपालिका विभिन्न विद्यालयमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी थियो । त्यहाँ नअट्ने र थप आउनेलाई अरु पालिकामा बनिरहेका क्वारेन्टाइनमा राखिने छ ।
सीमा पारि झण्डै एक हजार छ सय नेपाली एक महिना अघिदेखि आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । ति बाहेक खुला सिमानको फाइदा उठाउँदै दसगजाबाट हिंडेरै लुकेर छिर्नेहरुको संख्या पनि धेरै छ । उनीहरुलाई पनि सोधीखोजी गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । सीमानामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएपनि लुकेरै आएका व्यक्तिले जोखिम बढाएको भन्दै समुदायलाई नै सक्रियता बढाउन जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् । सीमामा आएका नेपाली, गुल्मी, पाल्पा अर्घाखाँची, स्याङजा, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका रहेको बताइएको छ । यसका अतिरिक्त प्रवासी नेपालीलाई नै लक्षित गरेर भारतले रेल सेवा सुरु गरेपछि अरु हजारौंको संख्यामा नेपाली आउने सम्भावना छ । स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई आउन दिने तर उनीहरुको नाम, ठेगाना लगायतका विवरण पहिल्यै संकलन गरेर सम्बन्धित पालिकाहरुमा पायक मिलाएर राख्नेगरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसीको सुझाव छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा पनि नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गरेर राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । अलपत्रलाई सीमापारि नै रोक्दा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्न क्रम बढेपछि संक्रमणबाट जोगिन वैधानिक रुपमा नाकाबाट ल्याउन लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् । रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँकेसहित छ जिल्लाहरु भारतीय सीमासंग जोडिएका छन् । भारतबाट कतिको संख्यामा आउने हुन भन्ने कुनै यकीन छैन । हजारौंको संख्यामा अहिले नै सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेकाले भारतमा रेलसेवा सहज भएपछि त्यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी उपरिक्षक हेमकुमार थापाले सीमा क्षेत्रमा नियमित निगरानी गस्ती भएपनि खुला सीमानाको गलत फाइदा उठाउनेहरु चुनौतिका कायमै रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले बैधानिक रुपमै सीमानाकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर भित्राउने गरि तयारी भइरहेको बताउनुभयो । भारतमा मंगलबारदेखि रेल सेवा शुरू भएपछि सीमा अझै नेपाली बढ्ने देखिएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरि अधिकारीले रुपन्देहीका स्थानीय तहको सहकार्यमा अलपत्र नेपालीलाई भित्राउन लागिएको बताउनुभयो । ‘सबैलाई सुरक्षित ल्याउनुपर्नेछ, सुरक्षित रुपमै राख्नुपर्छ,’ उहाँको भनाइ छ । कपिलवस्तुका केही स्थानीय तहले पनि मंगलवार पाँच सय अलपत्रलाई जिल्ला भित्राएर क्वारेन्टाइनमा राखेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलको भनाइ छ । सीमामा बुधबारसम्म मात्रै एक हजार पाँच सय जना प्रवासी रहेका छन् ।